Non-woven packaging bags manufacturers and suppliers | Yixin
Non-kpara nkwakọ bags
Non-kpara nkwakọ akpa akpa mere nke na-abụghị kpara akwa, nke na-adịkarị eji maka nkwakọ isiokwu ma ọ bụ ndị ọzọ na nzube. Ọ bụ ụdị nke na-abụghị kpara akwa nke a kpụrụ site na iji elu polima ibe, obere akwara ma ọ bụ filaments na-etolite emep uta eri site ikuku eruba ma ọ bụ n'ibu netting.
The ibu nke na-abụghị kpara nkwakọ akpa bụ nke yiri nke ndị nkịtị akwụkwọ na akpa na plastic akpa, ma ọ na-hụrụ n'anya onye ọ bụla n'ihi na nke practicability, aesthetics na gburugburu ebe obibi nchebe.
Ebe ọ bụ na ntọhapụ nke ndị plastic ịgba iji, plastic akpa nwayọọ nwayọọ napụrụ mkpo ahịa na-anọchi na-abụghị kpara akpa. Non-kpara akpa ike ga-eji ọ bụghị nanị na ugboro ugboro, ma na-e biri ebi na-nakawa etu esi na mgbasa ozi. Ọ na-nwere ike iwerekwa na ala na-eri ọnụego, nke na-abụghị nanị na-azọpụta-akwụ ụgwọ, ma na-emekwa ka mgbasa ozi uru.
Traditional shopping akpa bụ ìhè, na-emebi emebi ma na-azọpụta costs.In iji mee ka ọ dị ike, ọ na-efu ego. Non-kpara shopping akpa nwere ike idozi nsogbu na ezi ike na adịghị mfe ịkwụsị. Ke adianade ya sikwuo ike, ọ na-nwere àgwà nke waterproof, ezi aka mmetụta na ezi anya. Ọ bụ ezie na ndị na-eri nke ukwuu, nke ọrụ ndụ dịtụ ogologo.
A mara mma ndị na-abụghị kpara akpa abụghịzi naanị a nnweta. The na-atọ anya nwere ike hụrụ n'anya, na ọ pụkwara ghọọ a fashionable na mfe ubu akpa, nke na-aghọ a mara mma. Ihe e ji mara nke siri ike na mmiri na-eguzogide ma-aka-n'ịnọgide na-akpa oke maka ndị ahịa. Ke adianade do, ihe ịrịba ama ma ọ bụ mgbasa ozi nwere ike e biri ebi na-abụghị kpara akpa ike ihe mgbasa ozi mmetụta.
Iji dozie nsogbu gburugburu ebe obibi, a plastic ịgba iji e nyere. The ugboro ugboro ojiji nke na-abụghị kpara akpa nke ukwuu belata nrụgide nke mkpofu akakabarede, nke mere na ike uru na-adịghị na-anọchi ego, na ya ga-edozili nsogbu ahụ nkịtị nkwakọ abụghị mfe rụrụ arụ.
ọkpụrụkpụ Ime Otu
Na ìhè gburugburu ebe obibi, na ọkpụrụkpụ dị iche nke dị mma na-akpa ákwà na-agaghị nnọọ nnukwu. Ma ndị ogbenye na-akpa ákwà ga-apụta nnọọ mkpumkpu na udidi iche nke ákwà ga-ibu. Nke a ga-ukwuu belata ibu amị ike nke ákwà. N'otu oge, ndị na-akpa ákwà na ndị ogbenye aka obi na-adị na-eme ka ndị na-eche nnọọ ike na-adịghị nro.
Iji belata na-eri, ụfọdụ recycled ihe na kwekọrọ ekwekọ nkezi nke na-agwọ gị n'ụlọnga na-kwukwara na ngwaọrụ, nke mere na-emepụta ákwà bụghị ike na ike ọdụdọ na-esi ike naghachi. Ọ na-ele ka ndị na-akpa ákwà ga-thicker na stiffer, ma ọ bụghị softer. Na nke a, ibu-amị ike bụ ogbenye, na decomposition ga-abụ nnọọ ihe siri ike ma ghara environmentally friendly.
Bag amị ikike
The ebu ibu nke akpa nwere ọtụtụ ihe na-eme na ike ọdụdọ, ekwedo, na akara spacing na akara nke akpa ihe onwunwe. Anyị na-enwe dị environmentally friendly ihe, na akara adopts 402 ọcha owu eri, na akara spacing bụ nditịm na dị na anya nke otu inch na ise ndudu, ka hụ na ebu ibu nke akpa.
Printing doo anya
Ọ bụrụ na ndị na-ebi akwụkwọ na ihuenyo na-adịghị eguzosi basked na, ọ bụrụ na ọ na-wetara n'ụzọ na-ekwekọghị, ọ bụrụ na ike nke na-ebi akwụkwọ na-arụ ọrụ na-adịghị ọbụna mgbe ịkpụcha ink, ndị ogbenye viscosity nke tapawa ga-eduga edoghị ebi akwụkwọ mmetụta.
Post oge: Dec-06-2018
Adress: The akpa n'ala nke Tanwutun Village, Mishui Street, Gaomi City, Weifang City, Shandong Province
Ụkpụrụ nke na-abụghị kpara akpa